Uruurinta kheyraadka bilaashka ah qaabka mustaqbalka | Abuurista khadka tooska ah
Aruurinta ilaha lacag la'aanta ah ee qaabka mustaqbalka
Futurism waa isbeddel farshaxanimo leh soo jiidasho badan, waa in la xusuusnaadaa in muhiimaddeeda badan ay sabab u tahay xaqiiqda ah inay ka mid ahayd kuwa fara ku tiriska ah ee soo jeediyay koon faneed laga soo billaabo, cusbooneysiinta afka fanka iyo ka tagista raad weyn. sawirada soo socda. Marar badan ayaan maqlay in mustaqbalku ka maqan yahay naf, dadnimo, oo aan u malaynayo dibi dhac dhab ah. Marka laga eego aragtida astaamaha, tiknoolajiyada cusub ayaa sidoo kale ah miraha maskaxda aadanaha, natiijada saacadaha iyo saacadaha badan ee shaqada fikradda sidoo kale saameyn ku leh daryeelka bulshada. Shaqada leh astaamo mustaqbal leh waxay leedahay awood buuxda iyo fursad ay ku gudbiso shucuur xoog leh iyo dareen soo jeedin ah, aad ugu eg shiraac "dhaqameed" ama farshaxan ah, laakiin waxay si cad u isticmaalaan luuqado kala duwan, sidaa darteed ma ahan kuwo la isbarbar dhigi karo. Dhanka kale, marka laga eego dhinaca rasmiga ah ee aragtida waxay leedahay waxyaabo ugu yaraan dareenkeyga aad u qabta. Xargaha iftiinka, jajabyada midabada leh, qaababka macdanta, walxaha la taaban karo ...
Waxaas oo dhan, waxaan u maleynayaa inaan uqalnay uruurin kooban oo kheyraad ah oo kujira inta badan qaabkan. Aqlabiyaddu waa wax aan la taaban karin, maxaa yeelay runtii aad baan uga helay iyaga. Waxaad ku soo dejisan kartaa iyaga oo bilaash ah xiriiriyeyaasha hoos ku lifaaqan. Waxaan rajeynayaa inay kuugu adeegi doonaan abuurka qaarkood! ;)
Waxyaabaha la jaro
Khadadka midabada leh
Baadhitaanno badan oo midabbo kala duwan leh
Baloogyo xarrago leh
Dhismayaasha dhaadheer ee mustaqbalka
Soo saarid saafi ah (wow)
Qaab dhismeedka macdanta
Midab bilaash ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Aruurinta ilaha lacag la'aanta ah ee qaabka mustaqbalka